Itch, fampiharana ho an'ity sehatra ity avy amin'ny mpamorona tsy miankina | Ubunlog
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Itch isika. Ity dia sehatra ho an'ny mpamorona nomerika tsy miankina izay mifantoka indrindra amin'ny lalao indie. Natomboka tamin'ny tranokala fampiantranoana, fivarotana ary fampidinana kilalao horonantsary tsy miankina ity tetikasa ity. Androany koa dia manolotra boky, tantara an-tsary, fitaovana, feon-kira ary atiny nomerika maro kokoa avy amin'ny mpamorona tsy miankina. Azo raisina ho toy ny tetikasa Steam fa mifantoka amin'ny mpamorona sy mpamorona tsy miankina.
Ity tetikasa ity dia natombok'i Leaf Corcoran ny volana martsa 2013. Tamin'ny febroary 2018 dia efa nisy lalao sy lahatsoratra 100.000 XNUMX teo ho eo. Amin'ny maha mpampiasa azy, Azontsika atao ny misintona an-tserasera ireo atiny nomerika ireo na amin'ny vidiny napetraky ny mpamorona. Ny fampidinana sy ny fividianana anay rehetra dia ampifandraisina amin'ny kaontinay, mba hahafahanay misintona rehefa maniry.
Tamin'ny volana Desambra 2015, nanambara ny serivisy serivisy amin'ny birao hametrahana lalao sy atiny isan-karazany amin'ny rafitra fiasa samihafa ny serivisy. Navoaka niaraka tamin'ny fanohanan'ny Gnu / Linux, Windows, ary macOS. Androany ity fampiharana ity dia atolotra ho fomba tsara indrindra hilalaovana ny lalao itch.io.
Itch dia sehatra iray ho an'ireo mpamorona mahaleo tena sy mpanohana modely toy izany. Ity sehatra ity dia mampiasa ny 'mandoa izay tianao aloa', izay ahafahan'ny mpividy mandoa vola mitovy na lehibe kokoa noho ny vidiny napetrak'ilay mpamorona atiny. Izy io koa dia manana modely misokatra amin'ny fizarana fidiram-bola. Ny mpamorona dia mety mizara ny ampahany amin'ny vola azony amin'ny Itch.
1 Endri-javatra ankapobeny an'ny Itch Desktop App
2 Mametraka mangidihidy amin'ny Ubuntu
3 Fafao ny app desktop
Endri-javatra ankapobeny an'ny Itch Desktop App
Ho afaka hijerena ny Itch amin'ny tranokalany izahay, fa afaka hampiasa ny rindranasa birao open source anao koa izahay. Ho hitantsika ao ny zavatra toy ny:
Ho vitantsika mitady lalao sy atiny hafa, ary koa afaka misintona azy ireo amin'ny rafitray.
Hanolotra antsika ny mety hisian'ny mamorona fanangonana halamina ny fampidinana anay.
Ny fampiharana mangidihidy dia misy amin'ny fiteny 20 mahery.
Ity app desktop ity fanavaozana ho azy.
Ny lalao alaina eto amintsika dia havaozina ho azy koa.
Raha milalao lalao miorina amin'ny tranokala ianao, azo lalaovina ivelan'ny Internet mampiasa ny app Itch desktop.
Mametraka mangidihidy amin'ny Ubuntu
Ny fametrahana an'ity fampiharana ity amin'ny rafitra Ubuntu anay dia tena tsotra. Itch dia manome fisie installer antsoina hoe itch-setup. Ity rakitra ity dia azo sintonina avy amin'ny anao pejy download.
Ny rakitra fametrahana tokony hiasa amin'ny fizarana Gnu / Linux izany, raha toa ka manana GTK 3 (libgtk-3-0) napetraka isika.
Aorian'ny fisintomana ny rakitra fametrahana dia tsy maintsy manao izany ihany isika tsindrio havanana ity installer ity ary omeo alalana izy amin'ny alàlan'ny fanamarihana ilay boaty hoe "Avelao hitantana ny fisie ho programa".
Amin'izao zava-misy izao, azontsika atao ny mihazakazaka ny rakitra apetraka amin'ny alàlan'ny fanindriana indroa ny fonosana. Hanomboka ny fampidinana ny kinova Itch farany ity.
Ity dingana ity dia mety maharitra fotoana, miankina amin'ny hafainganan'ny Internet azon'ny mpampiasa tsirairay atao. Afaka minitra vitsy dia tokony ho hitantsika ity efijery manaraka ity, izay hangataka antsika hiditra amin'ny kaontintsika. Raha tsy manana isika, Afaka mamorona kaonty maimaimpoana isika amin'ny fipihana ny rohy "Registrarse".
Raha vantany vao miditra ianao, ny programa Hanome antsika ny fahafahana mijery ireo lalao sy atiny hafa, ary koa misintona na mividy azy ireo. Ity fizotry ny fametrahana iray manontolo ity dia tena mitovy amin'ny fametrahana Steam amin'ny Ubuntu.
Mpampiasa Ubuntu, afaka mahita ireo fisie mangidihidy ao anaty fampirimana isika ~ / .itch. Ny atiny izay ho sintonina, amin'ny ankapobeny dia ho hitantsika ao izy io ~ / .config / mangidihidy.
Fafao ny app desktop
Raha tsy liana amin'ny fampiasana Itch intsony ianao dia afaka esory amin'ny rafitray amin'ny fomba tena tsotra. Mila manokatra terminal fotsiny isika (Ctrl + Alt + T) ary hampiasa ity baiko manaraka ity:
Ny baiko etsy ambony dia tsy hamafa ny tranomboky atiny. Izany no antony, raha te hamafa ireo lalao alaina sy zavatra hafa ianao dia tsy maintsy mamafa ny fampirimana ~ / .config / mangidihidy amin'ny tanana mampiasa ity baiko manaraka ity:
Raha liana te hahafantatra bebe kokoa momba ity tetikasa ity ianao dia afaka manao izany ny mpampiasa maka hevitra tranokalan'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Itch, fampiharana ho an'ity sehatra mpamorona nomerika tsy miankina ity
Navoaka sahady ny kinova Pinta 1.7, analog an'ny Paint.NET
Ubuntu 20.04.1, namoaka ISO vaovao miaraka amin'ny fanavaozana rehetra tao anatin'ny telo volana lasa